« Kidnapping karana » tetsy Tanjombato: maty voatifitra ilay karana Irfan Farouk Daya | NewsMada
« Kidnapping karana » tetsy Tanjombato: maty voatifitra ilay karana Irfan Farouk Daya
Par Taratra sur 01/02/2019
Afaka nitsoaka ihany ireo zanany roalahy niray fiarakodia taminy. Saingy ny rainy, Irfan Farouk Daya kosa namoy ny ainy, noho ny tifitra sy tsatoka antsy, nataon’ireo jiolahy mpanao « kidnapping », saika haka an-keriny azy ireo, tetsy Tanjombato, omaly tolakandro.
Fiarana karana, avy nivarotra teny Isotry, no nisy jiolahy tsy fantatra isa nanakana teny amin’ny zone Forello Tanjombato, omaly hariva tokony ho tamin’ny 6 ora teo. Olona telo ireo no tao anatiny, izay voalaza fa i Irfan Farouk Daya sy ny zanany roa lahy no tao anaty fiara.
Araka ny vaovao avy amin’ny CFOIM (collectif français d’origine indienne de Madagascar), namoy ny ainy tamin’izany Irfan Farouk Daya, ilay Karana raim-pianakaviana. Afaka nitsoaka ihany kosa ireo zanany roa lahy. Nilaza ny CFOIM fa nitifitra ireo jiolahy, ary mbola narahana tsindron’antsy izany, fa avotra ihany ireo zanak’ity namoy ny ainy roa lahy.
Nisy kosa anefa ny filazana hafa fa nanipy grenady tamin’ny fiara ireo jiolahy ka izay no nahafaty ilay olona iray tao anatiny. Tsy nanamarina io grenady io ny avy amin’ny CFOIM. Tonga teny an-toerana ny polisy sy ny zandary nanao ny fanadihadiana omaly hariva. Tsy mbola nanamarina ihany koa ny momba ny grenady sy ireo jiolahy izy ireo. Andrasana ny fanazavana.
Andohatapenaka Jiolahy mpanao ”kidnapping” iray lavon’ny zandary, roa tafatsoaka
Jiolahy iray maty voatifitry ny zandary teny Andohatapenaka, omaly tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany maraina. Roa kosa tafaporitsaka avy hatrany, na efa niezaka nanenjika aza ny zandary. Fantatra fa olon-dratsy saika hanao kidnapping teny an-toerana ireo, izao tratra izao. Efa hatry ny afakomaly ny nahafantarana ny fisian’ireo andian-jiolahy ireo, ka nahafan’ny zandary nanao ny fanadihadiana lalina avy hatrany.
Fianakaviany efa nanaovan’ireto jiolahy fakana an-keriny taloha no mbola rahonany sy ampitahoriny halaina an-keriny indray raha tsy manome vola. Omaly maraina, tonga teny 67 ha ireo jiolahy ary niantso ireo fianakaviana izay nandefa iraka hanatitra kitapo feno vola ho azy ireo.
Voamarina, arak’izany, ny vaovao rehetra izay voaangon’ny zandary ny amin’ny maha jiolahy mpaka an-keriny azy telo lahy ireo. Raha iny handray ilay kitapo iny indrindra ilay tovolahy iray no nifampitoloman’ny zandary avy ao amin’ny “Escadron de sécurité et d’intervention” (ESI), izay samy nanao fanamiana sivily ka nahavoafitaka azy ireo. Tao anatin’izany anefa, nosintonin’ilay jiolahy iray ny basin’ny zandary. “Voatery nampiasa ny basiny ireo zandary namany hafa mba tsy hisian’ny loza haterak’izany. Lavo noho izany io jiolahy io », hoy ny lehiben’ny Emmo/Reg, ny lt kly, Randrianarivelo Annicet.
Ireo namany roa kosa tsy tratra noho ny fitangoronan’ny olona. “Mbola tazana nandritra ny fotoana vitsivitsy ihany izy ireo mandra-pisitriny tanteraka, saingy tsy sahy nampiasa ny basiny ny zandary satria aleo namotsotra azy ireny toa izay nandratra na nahafaty olona tsy manan-tsiny”, hoy ny fanazavana . Tafaverin’ny zandary tamin’ireo fianakaviany ny vola.